FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA HIPEDIA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Hipedia
Coby, sabotsy volafotsy sabotsy tamin'ny faha-4 taonany, sary natolotry ny MistyTrails Habaya
Alika Silika Havana
Raha tsy primped, clipped na nanova na oviana na oviana, ny H Dutch dia manome fiheverana goavambe amin'ny alika kely. Mahery ny tongotra ary mamela hetsika maimaim-poana sy mora. Ny maso maizina sy ny rambony lava dia rakotra volo lava sy lava. Ny palitao be volo dia miovaova arakaraka ny mikorisa ka hatramin'ny olioly mankany amin'ny tadiny. Ny palitao misy kofehy dia eken'ny AKC (American Kennel Club) sy ny CKC (Canadian Kennel Club). Ny Hipedia dia karazany mifono landy manana volo malefaka, na amin'ny akanjo ivelany na amin'ny akanjo lava. Ny palitao olon-dehibe dia mahatratra 6 ka hatramin'ny 8 santimetatra, ary manana fehezam-boninkazo. Ny Heball sasany dia mitondra gère recessive fohy. Raha olon-dehibe roa miaraka amin'ity gama resesive ity dia manana fako alika kely , azo inoana fa ny sasany amin'ireo alikakely dia hateraka miaraka palitao malama . Tsy afaka aseho ny Havaingo manana palitao fohy, satria lesoka lehibe eo amin'ny sehatry ny seho izany. Ny sasany nanao anaram-bosotra ny Hipedia teraka miaraka amin'ny akanjo fohy Shinese. Ny sisin'ny maso, ny orona ary ny molotra dia mainty amin'ny loko rehetra, ankoatry ny tena alika sôkôla. Ny Hipedia dia tonga amin'ny loko rehetra, ao anatin'izany ny crème, ny volamena, ny fotsy, ny volafotsy, ny manga sy ny mainty. Koa parti sy tricolor. Any Amerika Avaratra, ny loko rehetra dia ekena fa tsy misy ny lokon'ny loko iray hafa. Ny mainty sy ny sôkôla no loko tian'ny ankamaroan'ny mpiompy Amerika Avaratra. ny sôkôla Tsy maintsy mitazona volo sôkôlà 1 santimetatra farafahakeliny ny Hipedia. Ny sôkôlà koa dia manana maso maitso na amber. Any amin'ny firenena eropeana sasany, ny alika mainty sy sôkôla dia tsy ekena lalandava, fa ny alika mainty dia efa am-polony taona maro, ary ny alika sôkôla dia fantatra ankehitriny. Ny dia tsy manam-paharoa, velona ary 'lohataona, 'izay manasongadina ny toetra falifaly an'ny Hipedia. Ny rambony dia entina any ambadika rehefa mandeha. Ny karazany dia manana endrika ara-batana matanjaka sy lalàm-panorenana. Miorina mafy ny Hipedia, ary na dia karazany kely aza izy io, dia sady tsy marefo no be loatra.
Alika mpiara-miasa voajanahary ny Heball, malemy paika sy mahay mandray. Lasa mifamatotra amin'ny fianakavian'olombelona izy ireo ary tsara amin'ny ankizy. Tena be fitiavana sy milalao amin'ny faharanitan-tsaina avo lenta, ireo alika falifaly ireo dia tena tia fiaraha-monina ary hifanaraka amin'ny olona rehetra, anisan'izany ny olona, alika , saka SY biby hafa . Mora manofana izy ireo. Ity alika liana liana ity dia tia mandinika izay mitranga. Mahatsapa ny feon'ny olona iray izy ary tsy hihaino raha mahatsapa fa matanjaka kokoa noho ny tompony izy, na izany aza tsy hamaly tsara ny fifehezana henjana. Ny tompon-trano dia mila milamina, nefa manana rivotra voajanahary. Ny Hipedia dia manana laza malaza amin'ny alika boribory, angamba satria mianatra haingana izy ary mankafy manao zavatra ho an'ny olona. Vitsy ny mirona hombo matetika, satria afaka ampianarina tsy hanao an'io izy ireo dia tsy fanaon'izy ireo ny mibontsina be. Ny tsara indrindra dia ny mampianatra azy ireo mba tsy hitraka tsy amin'antony rehefa mbola tanora izy ireo hanakanana azy tsy ho lasa fahazarana. Alika mpiambina tsara ny fiteny anglisy, ka azo antoka fa hampandre anao rehefa tonga ny mpitsidika, fa handray an-tanana haingana ny vahiny raha vao hitany fa mandray azy ireo ianao. Ny alika sasany izay tsy nifaneraserana araka ny tokony ho izy dia mety haneho fahamenarana amin'ny olon-tsy fantatra, saingy tsy mampiavaka ny karazany izany. Miaina ho an'ny teny sy fihetsikao ny fiteny anglisy. Tsy tokony ho saro-kenatra izy ireo na masiaka —Raha misy izy ireo, dia vokatry ny a olombelona izay tsy manome fitarihana fonosana sahaza ary / na tsia mitsabo ny alika toy ny kaninina, fa olombelona ihany . Tsy mampiseho kanosa ny Hipedia, na eo aza ny habeny. Aza avela hivoatra ny Hipedia Syndrome kely alika .
Hahavony: 8 - 11 santimetatra (20 - 28 cm)
Lanja: 7 - 13 pounds (3 - 6 kg)
Ity dia karazan-tsakafo tena salama lava, na izany aza, ny karazany lava rehetra dia manana olana ara-pahasalamana ihany amin'ny farany. Ny sasany dia PRA (Progressive Retinal Atrophy), maso poodle, katarakta mpandova zaza, Chonrdodyplasia, famelomana patellar (kneecaps mipetaka), aretin'ny Legg-Calve Perthes, aretim-po, aty ary ny voa, ny marenina amin'ny lafiny iray sy ny roa tonta, Sebaceous Adentis (SA), fanintona sy hoditra maina.
Ny Hipedia dia tsara amin'ny fiainana an-trano. Mavitrika be izy ireo ao an-trano ary hanao tsara raha tsy misy tokotany. Teraka hivelona ao an-tranonao ny Hipedia, fa tsy amin'ny patio na kennel, fa mandritra izany fotoana izany dia mila fanatanjahan-tena betsaka izy ireo.
Ity alika kely milalao ity dia misy fangatahana fanatanjahan-tena antonony. Ity karazana ity dia mila raisina isan'andro MANDEHANA . Eo am-pandehanana dia ataovy izay hahazoana antoka fa ny alika voditongotra no mitarika. Fihetseham-po ho an'ny alika ny mifindra monina isan'andro ary manana mpitarika, ary ao an-tsain'izy ireo ny mpitarika no mitarika ny làlana. Tena zava-dehibe tokoa ny fiompiana biby fiompy voalanjalanja sy voalanjalanja.
Manodidina ny 14-15 taona
Alika kely 1 - 9, 4 antonony
sary mifangaro chihuahua sy maltese
Ho an'ny biby fiompy dia azo esorina fohy ny palitao mba hikarakarana mora kokoa. Raha tehirizina ela ny palitao dia mila kosehina tsara sy atotika farafahakeliny indroa isan-kerinandro. Misy menaka manitra hisorohana ny volo tsy hisaraka. Ny palitao misy tariby dia mitaky fikarakarana manokana . Ny alika dia tsy teraka miaraka amin'ny akanjo lava. Fomba volom-bolo voafantina io. Azonao atao ny mifehy ny palitao na afaka miborosy palitao. Raha tsy misy fikarakarana olombelona ny alika dia mety ho korontana ny palitao. Ny palitao mitete dia fomban'ny olombelona ihany koa. Atsaharo ny volo be loatra eo anelanelan'ny lamban'ny tongotra. Ny tongotra mihitsy dia mety hokapaina mba hijery boribory. Ny alika aseho dia mila fikolokoloana bebe kokoa. Tsy dia misy raraka, ka ny volo maty dia tsy maintsy esorina amin'ny borosy. Zahao tsy tapaka ny maso sy ny sofina. Raha tsy madio madio ny sofina dia mora voan'ny aretin-tsofina. Ny hatsaran-tarehin'ny hain-tany anglisy efa voadio tsara dia mbola mijery mafy sy tsy miraharaha izy. Raha zatra ny alikao amin'ny fametahana fantsika hatramin'ny taonan'ny alika kely dia tokony hanaiky ny fomba fanao izy rehefa olon-dehibe. Ny nifiny dia tokony hosasana isan-kerinandro, ary io koa dia tsara indrindra atomboka amin'ny alàlan'ny alika kely. Ity karazany ity dia tsara ho an'ireo marary allergy. Alika tsy mandraraka sy tsy mahazaka alikaola izy ireo. Na izany aza, ny Shinese (Hipedia teraka miaraka amin'ny palitao fohy) izay manana palitao mitovy amin'ny alika antonony ary azo ampitahaina amin'ny lolo , mandatsa. Inoana izany, saingy mbola tsy voamarina 100%, fa tsy toy ny lava-pitenenana H asli, ny Shinese fohy volo dia tsy hypo-allergenic ary noho izany tsy safidy tsara ho an'ireo marary allergy.
Taorian'ny revolisiona frantsay, kiobanina ary rosiana, dia saika ny Hapon lany tamingana . Tsy dia fahita firy any Kiobà, ny karazan'omby dia niatrika krizy tamin'ny taona 1900, nefa ankehitriny dia mitombo ny lazan'ny olona manana mpino mazoto amin'ny karazany izay mikely aina amin'ny fiarovana azy ireo any Etazonia. Ity alika ity dia an'ny fianakavian'ny alika antsoina Bichons . Ny teny frantsay Bichon Frize dia midika hoe 'alika malemy' na 'alika mihintsy.' 'Bichon' dia manondro ny endrika misy volombava amin'ny karazany, satria ny teny hoe 'barbichon' dia midika ho somotra volombava, raha ny teny hoe 'Frize' dia midika hoe olioly. Ny Bichon Hipedia dia avy tany Kiobà avy amin'ny karazany taloha fantatra amin'ny anarana hoe Blanquito de la Habana (antsoina koa hoe Hipedia Silk Dog - karazany lany tamingana ankehitriny). Ny Bichon Hipedia dia nandravaka sy namelombelona ny tranon'ireo kiobàna aristokratika nandritra ny taonjato faha-18 sy faha-19. Bichon lapdogs dia nentina tany Kiobà tamin'ny taonjato faha-17 avy tany Eropa izay nifanaraka tamin'ny toetrandro sy ny fomba amam-panao any Kiobà. Tamin'ny farany, ireo toe-javatra ireo dia niteraka alika hafa, kely kokoa noho ireo teo alohany, miaraka amin'ny palitao fotsy tanteraka vita amin'ny landy. Ity alika ity dia ny Blanquito de la Habana. Tamin'ny taonjato faha-19, ny Cubans dia naniry ny hankafy ny Poodles frantsay sy alemanina, izay niampita tamin'ny Blanquito efa nisy hamorona Bichon Hipedia ankehitriny. Tamin'ny fampivoarana ny Hipedia, ny Blanquito dia natanjaka kokoa noho ny Poodle. Ny Bichon Heball dia niandoha tamin'ny taonjato faha-19 (1800-11899). Nihalehibe tany Kiobà hatrany tamin'ny taonjato faha-20 (1900-1999) ary io no biby fiompy / alika ankafizin'ny fianakaviana kiobàna. Tamin'ny taona 1970 no nanomboka ny fiompiana Hava any Etazonia. Tamin'ny taona 1960 dia kioban maro no nifindra monina tany Etazonia. Ny ankamaroan'ny Kiobàna mpitsoa-ponenana dia nanorim-ponenana tao Florida ary ny sasany nitondra ny biby fiompy (Hipedia). Mpiompy amerikana iray, Ramatoa Goodale no namonjy ilay karazany tsy ho lany tamingana. Nanao dokambarotra tamin'ny taratasy Florida izy, ary nahita fianakaviana mpifindra monina roa na telo izay nitondra ny Heballany avy any Kioba niaraka tamin'ny taratasy. Avy amin'izy ireo, Ramatoa Goodale dia nahazo Bichon Hipedia 6 niaraka tamin'ny zana-kazo: vavy iray misy alika vavy 4, ary tovolahy iray tsy mifandraika. Taty aoriana dia afaka nahazo lahy 5 hafa avy any Costa Rica izy. Amin'ny maha mpiompy za-draharaha dia nanomboka niara-niasa tamin'ireo alika 11 i Ramatoa Goodale. Ny tsipika voalohany dia niseho tamin'ny 1974. Nahafantatra azy ireo ny UKC tamin'ny taona 1991. Nahafantatra azy ireo ny AKC tamin'ny taona 1996. Ny CKC (Canadian Kennel Club) dia nahafantatra azy ireo tamin'ny taona 2001. Manodidina ny taona 1980, mpiompy alemanina maro no nanomboka nahita zanak'alika kely mifono lamba litters miaraka amin'ny Hipedia mahazatra . Rehefa nihalehibe ireo zanak'osy ireo dia tsy nanamboatra palitao feno toy ny mpiray fako aminy. Izy ireo dia manana volom-borona amin'ny zipo, rambo, tongotra, tratra ary sofina - ny sisa taovan'ny volo dia mandainga. Nahagaga fa nihalehibe izy ireo mba hanana palitao malama. Niara-nivory ny mpiompy ary nahita fa izany dia nitranga tamin'ny alàlan'ny fantsom-piteny Hava hafa ary tsy kisendrasendra fanovana ao anaty fako tokana, fa zavatra iray nateraka be dia be tamin'ny fiteny Hapon. Nantsoina ireo alika ireo malefaka mifono Hava , saingy noraisintsika ilay anarana Shinese any ho any. Ny haingo fohy mifono fohy dia tsy miseho na azo volena, na izany aza dia salama tanteraka.
Ireo Hipedia voasoratra anarana ao amin'ny Original Hipedia Club (OHC) ihany no azo voasoratra anarana ao amin'ny UKC. Ny Hipedia dia eken'ny American American Rare Breed Association ihany koa.
Jazz ilay teratany sinoa miendrika curly miaraka amin'ny palitaony nohaingoina fohy.
Ny ekipazy ao amin'ny MistyTrails Hipedia — Reo ao anatin'ny 1,5 taona, Conchita 1 taona, Purdy amin'ny 4 volana, Lucy ary Splash tamin'ny 3 volana, Sebastion tamin'ny 3 taona ary Catreeya tamin'ny 4 taona
Alika kely Hipedia amin'ny 8 herinandro, sary natolotr'i MistyTrails Hipedia
bichon frize sy ny mpanjaka cavalier Charles spaniel afangaro
Zorro, natolotr'i MistyTrails Hipedia — Ny vadin'i Zorro dia avy any Espana. Io alika io dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra CKC sy AKC ho an'ny Hipedia.
Ohatra amin'ny parti sôkôla, fotsy, manga biriky ary Heball mainty. Ny roa amin'ireo loko tsy fahita firy amin'ny karazany Hava dia ny birao manga sy parti sôkôla. Ireo loko sy ny mainty ireo dia tsy tao anatin'ny fenitry ny karazany. Sary natolotry ny MistyTrails Hipedia sy Elite Hipedia
Pablo miaraka amin'i Salida Salida dia Sinoa Kiobanina madio, nohafarana sy fananan'i Alida Wasmuth, sary natolotr'i MistyTrails Hipedia
Ny Hipedia dia afaka manana alikakely iray amin'ny fako tokana, ny alika kely 3, 4 na 5 dia mahazatra. Ny enina dia heverina ho fako lehibe ho an'ny H Dutch. Nanana bibikely 7-puppy marobe aho, fako 8-alika kely ary fako 9-puppy iray. Sary natolotry ny MistyTrails Hipedia
Hava-mandeha Corded MBIS CKC Grand Ch. Tompondakan'ny Ex / AKC / Intl Eddie Murphy ao amin'ny MistyTrails CGN, Alika # 1 any Canada. Sary natolotry ny MistyTrails Hipedia Aug 2012
Catreeya amin'ny 10 taona— 'Izy dia renin'ny alika kely 11 Tompondaka ary nandrombaka ny veterana tsara indrindra tamin'ny fampisehoana manokana. Niteraka an'i MistyTrails Hipedia izy. ' Tompony sy tian'i Steven Ballantyne
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Hipedia
Sary Hipedia 1
Sary Hipedia 2
Sary Hipedia 3
Sary Hipedia 4
Sary Hipedia 5
Sary Hava 6
Sary Hipedia 7
Sary Hipedia 8
Sary Hipedia 9
Sary Hipedia 10
Sary Hava 11
Sary Hipedia 12
Sary Hava 13
Sary Hipedia 14
Sary Hava 15
Sary Hava 16
Sary Hipedia 17
pics ny lehibe Pyrénées alika kely
tri miloko dachshund lava volo
amerikana bulldog pit mix mix alika kely